पञ्चेबाजा सहित बेहुला बेहुलीको घर पुगे, बेहुलाले आँगनमा टेके लगत्तै भयो यस्तो – Online Nepal Site
दैवको लिला! श्रीमान् श्रीमति जुन रोगका बिशेषज्ञ थिए, त्यही रोगले लग्यो नेपालकी यी चर्चित डाक्टरलाई
मुख्य पृष्ठ /Intresting/पञ्चेबाजा सहित बेहुला बेहुलीको घर पुगे, बेहुलाले आँगनमा टेके लगत्तै भयो यस्तो
पञ्चेबाजा सहित बेहुला बेहुलीको घर पुगे, बेहुलाले आँगनमा टेके लगत्तै भयो यस्तो
घटना हो भारतको उत्तर प्रदेशस्थित कन्नौज जिल्लाको। भारतीय मिडियाका अनुसार ठठिया थाना क्षेत्रको गाउँ भगतपुरवामा राजकिशोर बाथमको १९ वर्षीया छोरी विनिताको शुक्रवार बिहे हुनै लाग्दा उनको निधन भएपछि माइती र बेहुला पक्ष दुवै समस्यामा परे । खुशीको माहोलमा एक्कासी सन्नाटा छायो ।
बेहुली लिन पञ्चेबाजा सहित गएका बेहुला र उनको परिवारमा पनि रुवाबासी छायो ।बेहुलीका बा आमा अचेत बने । प्रहरी थाना प्रभारी विजयबहादुर वर्मा र उपनिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार घटनास्थल पुगेर शवलाई पोष्ट मार्टमका लागि पठाएका छन् । पो ष्टमार्टम रिर्पोटपछि मात्रै घटनाका विषयमा थप बोल्न सकिने प्रहरी थाना प्रभारी विजयबहादुर वर्मा र उपनिरीक्षक शैलेन्द्र कुमारले बताए ।
श्रीमानकै साथीसंग माया बसेर भागेकी श्रीमतीले श्रीमानलाइ फोन गरेर भनिन्, ‘तिम्रो माया धेरै लग्यो मलाई लिन आउ’
यी ४ राशी हुने व्यक्ति सबैभन्दा धनी हुन्छन् !!